Xiddiga Juventus Douglas Costa oo shil halis ah galay (Sideey wax u gaareen?) – Gool FM
“Waxaan jebin doonaa Rikoodh walba” – Cristiano Ronaldo
Eric Abidal oo xaqiijiyey Weeraryahanka ay xiiseynayso Barcelona, kaasoo bedel u noqonaya Luis Suarez
Kooxda Arsenal oo ka fiirsanaysa inay dalab 43 milyan oo gini ah ka gudbiso Torres
Taageerayaasha Kooxda Liverpool oo ka walaacsan badalkii lagu sameeyey Sadio Mane kulankii xulkiisa Senegal uu guusha ka gaaray Eswatini
Xiddiga Juventus Douglas Costa oo shil halis ah galay (Sideey wax u gaareen?)
Byare February 4, 2019
(Turin) 04 Feb 2019 Laacibka reer Brazil ee garabka weerarka uga ciyaara kooxda kubadda cagta Juventus ee Talyaaniga ayaa saakay shil halis ah ku galay waddada weyn ee A4 ee dhanka magaallada Torino, meel ku dhow Santhia.
Baabuurkii uu watay Costa oo ahaa Jeep ayaa waxa ay si xun isugu dheceen baabuur yar oo Fiat ah, taasoo keentay in labadii baabuurba burbur xooggan ay soo gaaraan, waxaana Douglas Costa ay jaraa’idyada Talyaanigu qoreen in uu si mucjiso leh uga bad baaday shilkaasi halista ah (vivo per miracolo).
Durbadiiba taraafikada, dab damiska iyo ambalaasta ayaa gaaray goobtii shilku ka dhacay, iyadoo Douglas Costa aan wax dhaawac ah soo gaarin, halka ninkii kale ee watay baabuurkii Fiat-ka ahaa oo 47 jir ahaa uu dhaawacmay Isbitaalkana loola cararay.
Douglas oo taageerayaashiisa Juventus niyadda u dhisaya ayaa soo dhigay sawir uu bad qabo bartiisa Instagram markii shilkaasi dhacay kaddib.
A post shared by ⚡️DC11⚡️ (@douglascosta) on Feb 4, 2019 at 4:24am PST
Xagguu marayaa heshiiska ay Real Madrid la damacsan tahay inay u kordhiso Modric ?
Shaxda rasmiga ah ee kooxaha West Ham United Vs Liverpool